हलमा ‘कायरा’ र ‘झमकबहादुर’, कुन हेर्ने ? « Ramailo छ
हलमा ‘कायरा’ र ‘झमकबहादुर’, कुन हेर्ने ?
यो शुक्रबार दुई नयाँ नेपाली फिल्महरु प्रदर्शनमा आएका छन् । आर्यन सिग्देल र साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह अभिनित ‘कायरा’ सँगै अर्को फिल्म ‘झमकबहादुर’ पनि प्रदर्शनमा आएको छ । दुई फिल्मबारे छोटकरीमा केही चर्चा गरौं ।
लक्ष्मण रिजाल निर्देशित फिल्म ‘कायरा’मा आर्यन र साम्राज्ञी प्रेम जोडीको रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । म्युजिकल लभ स्टोरी फिल्मको सम्पूर्ण जसो छायाँकन फिलिपिन्समा गरिएको छ । पहिलो पटक पर्दामा जोडी भएर प्रस्तुत भएका आर्यन र साम्राज्ञीको यो फिल्म प्रतिक्षित छ । आर्यन र साम्राज्ञीसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
फिल्म ‘झमकबहादुर’ लाई बोमन कटुवाल निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा अनुप विक्रम शाही, यादव देवकोटा सरापे, राजु कमेडी, सुजता थापा, मिन कुमार तामांग, नियोना गुरुंग, राजन महर्जन, कल्याण अधिकारी, कोनिका घिमिरे, शान्त प्रसाद घिमिरे लगायतको अभिनय छ । कमेडी फिल्मलाई मिन कुमार तामांगले बनाएका हुन् । सरापे र सुजतासँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :